Zvikuru Zvikuru Zvinoshanduka Kupfuura Nguva | Martech Zone
Muvhuro, October 19, 2009 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Lorraine Bhora
Ini ndinoda maMac ads.
Vazhinji vanhu vanozviita, nekuti vanosetsa, vasingagumbure Ivo havana kutitakura isu nezvechigadzirwa ruzivo, asi mumasekondi makumi matatu kana mashoma, tinosangana nevateereri vavo, nekuti vanosvika? Chaipo pakurwadziwa?.
Sezvaunovaona, zviri nyore kufunga kuti Mac neApple zvakajairika zvagara zvine kushambadzira kukuru. Asi kutarisa nekukurumidza kune mamwe awo kushambadzira kwekutanga, inoburitsa chokwadi chakashata, uye ndinoreva kushata. Apple yakatanga yakafanana nePC nekopi inorema kushambadza, kutengesa maficha pane mabhenefiti.
Pane imwe nzira munzira, ivo vakawana izwi ravo uye kwavo kuseka. Zviziviso zvekutanga zvaive zvichiri zvishoma zvakare "zvinyorwa zvinorema", asi na1979 vaive vadzidza simba reyakasimba yekuona nemusoro senzira yekubata pfungwa dzedu. Nekufamba kwenguva, kushambadzira kwavo kwave kuwanda uye kutaridzika, rinova iro iro chairo simba rechigadzirwa chavo. Vakawana izwi ravo.
Chinangwa chebhizinesi rega rega kutsvaga izwi ravo. Mhando hadzigadziri dzakura zvizere, dzinochinja nekufamba kwenguva. Iyo internet nevezvenhau vezvenhau zvinokupa iwe mukana wekumhanyisa shanduko yako kana iwe uchienderana pane mapuratifomu. Chinetso ndechekugadzira hunonakidza, hunhu hunobata pa Twitter kana Friendfeed, iyo inotsigirwa nehunhu hwewebsite yako uye nekumwe kushambadzira kwako uye kushambadzira.
Uye nepo IBM ichiti inoguma Kushambadzira sekuziva kwedu Ini ndinofunga pachagara paine nzvimbo yevakangwara, vanoita kushambadzira iyo inotsigirwa neye smart uye inobata brand.
Tags: zvishandiso zvekumhanyachigumbusoWordPress
50,000,000 Makadhi Emabhizinesi!
Gumiguru 20, 2009 pa 11:23 AM
Ini ndinobvumirana zvachose nechinyorwa chako uye mac mac ads ndere bhizinesi, rinonakidza uye riine kuseka uko kunogona kuve kiyi yekusimudzira kwakanaka.
Gumiguru 20, 2009 na5: 39 PM
Zvandinoona zvinonakidza nezve Apple kushambadza ndezvekuti hazvisi zvavo kutengesa chigadzirwa chavo. Ivo vari kukuudza iwe kuti chinotyisa sei icho chimwe chigadzirwa chiri.
Gumiguru 27, 2009 na12: 44 PM
Apple iri kubatsira vanhu kuti vanzwe kurwadziwa uye vobva vape mhinduro. Chingave chirevo chine njodzi kana kurwadziwa kwacho kusiri kwechokwadi.